အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပြောတာနဲ့ တခြားစီ ဖြစ်နေတဲ့ ဖောင်ကြီးဆေးရုံရဲ့ တကယ့်အခြေအနေ (လူနာကိုယ်တွေ့) - Mega Wave
ကျွန်တော် ဖောင်ကြီးရာမညဆောင်မှာ လက်ရှိတက်နေတဲ့ လူနာတယောက်ပါ ဖောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြင်မှားနေတဲ့လူတွေ ရှိရင်ရှိမယ်
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ အခြေအနေကို ပြောပြချင်ပါတယ် တချို့အတ္တကြီးတဲ့လူတွေအဖို့ သူတို့ဆန္ဒပြည့်ဝဘို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး တချို့အဆိုးမြင်သမားတွေအဖို့တော့ ဘယ်တော့မှ အမြင်မှန်ဘို့ မလွယ်ပါဘူ:
၁၃-၉-၂၀၂၀ ကိုးနာရီကျော်လောက်မှာ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ဆေးရုံကြီးကနေ စထွက်လာပါတယ် လမ်းမှာ ဆေး(၂)ကုသဆောင်မှာ လူထပ်တင်ပါတယ် လူတော့ နဲနဲကျပ်ပါတယ် ကားနဲနဲကြီးရင်ပိုအဆင်ပြေပါမယ်ဖောင်ကြီးကို ည ၁၂:၀၀ကျော်ကျော်လောက်ရောက်ပါတယ်
အဲဒီရောက် တော့ အိပ်ယာ အိပ်ယာခင်း ခြင်ထောင်ခေါင်းအုန်း စောင် သွားပွတ်တန် သွားတိုက်ဆေး ဆပ်ပြာ ဆပ်ပြာခွက်ခေါင်းလျှော်ရေ ရေမွှေး Hand Gel ပုတီး Maskက အစ လိုလေသေးမရှိအောင် နိင်ငံတော်ကဖြည့်ဆည်းပေးထားတာတွေ့လို့ အံ့သြမိပါတယ်
ရောဂါကူးစက်တဲ့သူတွေများလာလို့ တယောက်ခန်းတော့ မရတော့ပါဘူး Hall ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ခန့်မှန်း7ပေလောက်ခြားထားပေးပါတယ် စားပွဲတလုံးပေးပါတယ်အားလုံးဘယ်ညာကုတင်26လုံးရှိပါတယ်.
ရောက်တဲ့ညမှာ တယောက်ချင်းစီ ဖုန်းဆက်ပြီး ဘာတွေမစားဘူးလဲဆိုတာ မေးပါတယ် နောက်နေ့ မနက်စာ ခေါက်ဆွဲကြော် နေ့လည် ငါးဖယ်ကုန်းဘောင်ကျော် အာလူးဟင်းငပိ သခွါးသီး ညစာ ငါးအရိုးလွတ် ကန်စွန်းရွက်ကျော် ချဉ်ပေါင်ကျော် စုံပါတယ်
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအတွက် ဟာလာ သက်သက်လွတ်သမားတွေအတွက် အသီးအရွက် ထမင်းဘူးကအပိုတွေ ပို့ထားပေးပါတယ် တချို့လူငယ်တွေ အစားကြီးရင် ထပ်စားရအောင်ပါ .တနေ့ ၃ နပ်ကျွေးပါတယ် အဆင်ပြေပါတယ် ဆေးကတော့ အိုရာမင်းစီ ပေးပါတယ်။
အားလုံးသုံးဘို့ သွေးပေါင်တိုင်းစက် အဖျားတိုင်းကရိယာ အောက်စီဂျင် နှလုံးခုန်နှန်းတိုင်းတဲ့စက်လေးတွေ ထားပေးပါတယ် မနက် ၆ နာရီဆို စပီကာနဲ့ အားလုံးသွေးတိုင်း အဖျားတိုင်း အောက်စီဂျင်တိုင်းပြီးရင် တာဝန်ကျဆရာဝန်ဆီ ဗိုင်ဘာ နဲ့ပို့ရပါတယ်
အဖြေကြည့်ပြီး လိုအပ်တဲ့လူနာကို တိုက်ရိုက် မေးပါတယ်။ ဆေးပို့ပေးပါတယ် အရေးပေါ်ဖြစ်ရင်တော့ PPE ဝတ်ပြီးကားနဲ့လာခေါ်ပါတယ်။ အချိန်တော့ နဲနဲစောင့်ရပါတယ်။ ၁၆-၉-၂၀၂၀မှာ အပေါ်ထပ်က တယောက် သွေးပေါင်ကျလို့ အဆောင်ပြောင်းပေးပါတယ်။
ပြီးတော့ နေကောင်းသွားပြီဆိုတဲ့ အကြောင်းပြန်ပြောပြပါတယ်
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးက ဗိုက်ခွဲလူနာ ဆန်ပြုတ်စားချင်တယ်ဆိုလို့ ဆန်ပြုတ်ပို့ပေးပါတယ် မီဒီယာမှာရေးသလို အဆင်မပြေတာမဟုတ်ပါ သူတို့အားလုံး အဆင်ပြေတယ် ပြောပါတယ်
နေ့စဉ် ရီပို့ တွေကြည့်ပြီး ဆရာဝန်တွေဆေးပေးတယ် ကိုယ်ခံစားတာပြောပြီးလိုအပ်တဲ့ဆေးတွေတောင်းလို့ရပါတယ် ၁၆-၉-၂၀၂၀ နေ့ကဘဲ အမျိုးသမီးလူနာ ၃ ယောက်အဆောင်ပြောင်းဘို့လာခေါ်သွားပါတယ်
ရာမညဆောင်မှာတော့ အရေးပေါ်ပြုစုဘို့မရှိပါ လိုအပ်ရင်ပြည့်စုံတဲ့ အဆောင်ကိုရွှေ့ပါတယ် အနောက်ပိုင်းခရိုင် ဆေးရုံကြီးမှာတော့ လိုအပ်ချက် အနည်းငယ်ရှိပါတယ် နောက်မှရေးပါအုန်းမယ်။
ကြှနျတျော ဖောငျကွီးရာမညဆောငျမှာ လကျရှိတကျနတေဲ့ လူနာတယောကျပါ ဖောငျကွီးနဲ့ပတျသကျပွီး အမွငျမှားနတေဲ့လူတှေ ရှိရငျရှိမယျ
ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောမွငျရတဲ့ အခွအေနကေို ပွောပွခငျြပါတယျ တခြို့အတ်တကွီးတဲ့လူတှအေဖို့ သူတို့ဆန်ဒပွညျ့ဝဘို့ဆိုတာမလှယျပါဘူး တခြို့အဆိုးမွငျသမားတှအေဖို့တော့ ဘယျတော့မှ အမွငျမှနျဘို့ မလှယျပါဘူ:
၁၃-၉-၂၀၂၀ ကိုးနာရီကြျောလောကျမှာ ရနျကုနျအနောကျပိုငျးခရိုငျဆေးရုံကွီးကနေ စထှကျလာပါတယျ လမျးမှာ ဆေး(၂)ကုသဆောငျမှာ လူထပျတငျပါတယျ လူတော့ နဲနဲကပျြပါတယျ ကားနဲနဲကွီးရငျပိုအဆငျပွပေါမယျဖောငျကွီးကို ည ၁၂:၀၀ကြျောကြျောလောကျရောကျပါတယျ
အဲဒီရောကျ တော့ အိပျယာ အိပျယာခငျး ခွငျထောငျခေါငျးအုနျး စောငျ သှားပှတျတနျ သှားတိုကျဆေး ဆပျပွာ ဆပျပွာခှကျခေါငျးလြှျောရေ ရမှေေး Hand Gel ပုတီး Maskက အစ လိုလသေေးမရှိအောငျ နိငျငံတျောကဖွညျ့ဆညျးပေးထားတာတှလေို့ အံ့သွမိပါတယျ
ရောဂါကူးစကျတဲ့သူတှမြေားလာလို့ တယောကျခနျးတော့ မရတော့ပါဘူး Hall ထဲမှာတယောကျနဲ့တယောကျခနျ့မှနျး7ပလေောကျခွားထားပေးပါတယျ စားပှဲတလုံးပေးပါတယျအားလုံးဘယျညာကုတငျ26လုံးရှိပါတယျ.
ရောကျတဲ့ညမှာ တယောကျခငျြးစီ ဖုနျးဆကျပွီး ဘာတှမေစားဘူးလဲဆိုတာ မေးပါတယျ နောကျနေ့ မနကျစာ ခေါကျဆှဲကွျော နလေ့ညျ ငါးဖယျကုနျးဘောငျကြျော အာလူးဟငျးငပိ သခှါးသီး ညစာ ငါးအရိုးလှတျ ကနျစှနျးရှကျကြျော ခဉျြပေါငျကြျော စုံပါတယျ
အစ်စလာမျဘာသာဝငျတှအေတှကျ ဟာလာ သကျသကျလှတျသမားတှအေတှကျ အသီးအရှကျ ထမငျးဘူးကအပိုတှေ ပို့ထားပေးပါတယျ တခြို့လူငယျတှေ အစားကွီးရငျ ထပျစားရအောငျပါ .တနေ့ ၃ နပျကြှေးပါတယျ အဆငျပွပေါတယျ ဆေးကတော့ အိုရာမငျးစီ ပေးပါတယျ။
အားလုံးသုံးဘို့ သှေးပေါငျတိုငျးစကျ အဖြားတိုငျးကရိယာ အောကျစီဂငျြ နှလုံးခုနျနှနျးတိုငျးတဲ့စကျလေးတှေ ထားပေးပါတယျ မနကျ ၆ နာရီဆို စပီကာနဲ့ အားလုံးသှေးတိုငျး အဖြားတိုငျး အောကျစီဂငျြတိုငျးပွီးရငျ တာဝနျကဆြရာဝနျဆီ ဗိုငျဘာ နဲ့ပို့ရပါတယျ
အဖွကွေညျ့ပွီး လိုအပျတဲ့လူနာကို တိုကျရိုကျ မေးပါတယျ။ ဆေးပို့ပေးပါတယျ အရေးပျေါဖွဈရငျတော့ PPE ဝတျပွီးကားနဲ့လာချေါပါတယျ။ အခြိနျတော့ နဲနဲစောငျ့ရပါတယျ။ ၁၆-၉-၂၀၂၀မှာ အပျေါထပျက တယောကျ သှေးပေါငျကလြို့ အဆောငျပွောငျးပေးပါတယျ။
ပွီးတော့ နကေောငျးသှားပွီဆိုတဲ့ အကွောငျးပွနျပွောပွပါတယျ
ရနျကုနျဆေးရုံကွီးက ဗိုကျခှဲလူနာ ဆနျပွုတျစားခငျြတယျဆိုလို့ ဆနျပွုတျပို့ပေးပါတယျ မီဒီယာမှာရေးသလို အဆငျမပွတောမဟုတျပါ သူတို့အားလုံး အဆငျပွတေယျ ပွောပါတယျ
နစေ့ဉျ ရီပို့ တှကွေညျ့ပွီး ဆရာဝနျတှဆေေးပေးတယျ ကိုယျခံစားတာပွောပွီးလိုအပျတဲ့ဆေးတှတေောငျးလို့ရပါတယျ ၁၆-၉-၂၀၂၀ နကေ့ဘဲ အမြိုးသမီးလူနာ ၃ ယောကျအဆောငျပွောငျးဘို့လာချေါသှားပါတယျ
ရာမညဆောငျမှာတော့ အရေးပျေါပွုစုဘို့မရှိပါ လိုအပျရငျပွညျ့စုံတဲ့ အဆောငျကိုရှပေ့ါတယျ အနောကျပိုငျးခရိုငျ ဆေးရုံကွီးမှာတော့ လိုအပျခကျြ အနညျးငယျရှိပါတယျ နောကျမှရေးပါအုနျးမယျ။
← မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့သိလိုက်ရလို့ ကိုဗစ်ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ ပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် မောင်
ဆေးရုံ(၄)ရုံမှာ စောင့်ကြည့်လူနာတွေထားနိုင်ဖို့ ငွေကျပ်သိန်း(၈၀၀) လှူခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေ →
ပုဂံ-ညောင်ဦးဒေသ ခရီးစဉ်သစ်(၅)ခုကို ဖော်ဆောင်နိုင် ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ဆောင်နေ
ရွှေငွေ ရတနာ သိန်း(၇၅၀)ကျော် ဖောက်ထွင်း ခိုးယူသွားပြီးမှ. . သိန်း(၅၀၀)ကျော် ပြန်လာထားပေးသွားတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဖောက်ထွင်းသူခိုး